अर्जुन खड्का | Nepal Flash
तनाव, विवाद र कटुताबीच जारी भएको नेपालको संविधान ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालमा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको अभ्यास मुलुकले गरिरहेको छ । संविधानले नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाएको छ । मौलिक...
२०४६ सालयता हरेक प्रधानमन्त्रीको आगमन उत्साहवर्धक थियो । कतिपय त धेरै शक्तिशाली ढंगले सिंहदरबार छिरेँ । केपी शर्मा ओली नै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा कसैले कर्के नजर लगाउने हिम्मत गर्ने अवस्था थिएन । उनी &#39;चक्रवर्ती&#39; नै थिए ।...
नेकपाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेर जनादेशलाई लत्त्याएका छन् । गएको निर्वाचनमा स्थिर सरकार चाहियो भनियो । भोट मागियो । जनताले पत्याए । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पायो नेकपाले । सरकार बन्यो । मुलुक हाँक्यो । तर...
मिति ठ्याक्कै याद भएन । धेरै पुरानो पनि होइन । २०५८ साल (सन् २००१) तिर हुनुपर्छ । जापानका प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीले केही दिनअघि मात्रै राजीनामा गरेका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्रीमा आसीन थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । काठमाडौंको खुलामञ्चमा नेकपामा एउटा सभा...
मुलुकले गणतान्त्रिक शासन पद्धति स्विकारेको १२ वर्ष भयो । गणतन्त्र कुनै वर्ग, जाति, सम्प्रदाय विशेषका लागि थिएन र होइन । समग्र देशको रूपान्तरणका लागि हो । भनिएको थियो- गणतन्त्रले नेपालका सबै विभेदको अन्त्य गर्दछ । मुलुकले प्रगतिको काँचुली फेर्ने छ...
नेकपाको राजनीतिमा बाह्‍य प्रभाव !
दुई सातायता नेकपाको राजनीतिले रोमाञ्चक बन्यो ।कोरोना र लकडाउनले घरभित्र सीमित भएका नेपालीलाई भरपूर मनोरञ्जन दियो । त्यो पनि सत्तासीन दलले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक अध्यादेश जारी गर्नू । ओलीविरोधी खेमाको भैँसेपाटी गठबन्धन । अध्यादेश फिर्ता । ओली...
आपत्तिजनक दल विभाजन अध्यादेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक ठाने । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओलीले हठात् राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने ठाडो अध्यादेश ल्याए । केही मन्त्रीले उचित समय नभएको तर्क गरे । अध्यादेश पछि संसद्मा गइहाल्छ,...
कोरोना भाइरसले विश्व आहत छ । हरेक क्षण दुखका समाचार आइरहेका छन् । संक्रमण र मृत्यु सामान्यझैँ बन्न थालेका छन् । संसारले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठुलो समस्या झेल्नु परेको छ । यो भाइरस आधुनिक विश्वका लागि चुनौतीको पहाड बन्दै छ ।...
निशानाबिनाको राजनीति !
बलियो सरकार भनियो । स्थिर सरकार चाहियो भनियो । गएको निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई मत दिए । त्यो असाधारण मत थियो । शक्तिशाली सरकार देख्ने चाहना त्यसमा बिम्बित थियो । राजनीतिक स्थिरतामार्फत जनजीविका र विकासको अभिलाषा थियो । त्यो जनमतको आयुकोमध्यान्तर...